Cooke miniS4 / i မျက်ကပ်မှန်များသည်ဆုရ DP Capture Nature's Beauty ကိုမည်သို့ကူညီခဲ့သနည်း NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » Cooke miniS4 / i မျက်ကပ်မှန်များကဆုရ DP Capture Nature's Beauty ကိုကူညီပေးခဲ့သည်
Cooke miniS4 / i မျက်ကပ်မှန်များကဆုရ DP Capture Nature's Beauty ကိုကူညီပေးခဲ့သည်
ဆုရ DOP / မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူ Mark MacEwen
သဘာဝတွင်၎င်းတွင်နှစ်ဖက်ရှိသည်။ ၎င်း၏ဆွဲဆောင်မှုကောင်းသည့်အချက်များတစ်ခုမှာတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ၏မျိုးစိတ်များကိုများစွာပေးသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအလှအပများကိုဖမ်းယူရန်အတွက်ကဲ့သို့သောထိရောက်သောမှန်ဘီလူးများပြုလုပ်ရန်အတွက်ရိုးရှင်းသောကင်မရာတစ်ခုထက်မကလိုအပ်သည် ချက်ပြုတ် miniS4 / i မှန်ဘီလူး အားလုံးကွဲပြားခြားနားစေနိုင်သည်။ Mark MacEwen ဆုများစွာရရှိထားသော DOP / Documentary ကင်မရာမင်းသားဖြစ်သည်။ Mark သည်သဘာ ၀ သမိုင်း၊ စွန့်စားခန်းနှင့်သိပ္ပံမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အစီအစဉ်များတွင်အဓိကလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကမာ့ခ်သည်မိုင်ထောင်ပေါင်းများစွာခရီးနှင်ခဲ့သည် ချက်ပြုတ် miniS4 / i မှန်ဘီလူးသူကပြသခဲ့ကြသည်သောရှေးခယျြထားပာရိုက်ကူးလေ့ရှိတယ် ကမ္ဘာခုနစ်ပါး, ဂြိုလ်တစ်ခု.
ကမ္ဘာခုနစ်ပါး, ဂြိုလ်တစ်ခု အဆိုပါဖြစ်ပါသည် ဘီဘီစီ ကွန်ယက်၏လတ်တလောအထင်ကရတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်စီးရီး။ ဤတောရိုင်းတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်သည်ယူကေတွင်အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ တွင်စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ ဤအစီအစဉ်သည်တိုက်ကြီးခုနစ်ခုစလုံးသို့လည်ပတ်ခြင်းနှင့်တစ်ခုချင်းစီတွင်တွေ့ရသောတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်အမျိုးမျိုးကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်ရိုက်ကူးခြင်း၏အထူးများကိုဆွေးနွေးသည့်အခါမာ့ခ်မက်ဝါဝင်းက - “ အဆင့်မြင့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ရိုက်ကူးခြင်း၏သဘောသဘာဝသည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ပင်ကိုယ်သိမြင်မှုရောနှောခြင်းဖြစ်သည်။ ”“ ကျနော်တို့ကတိရစ္ဆာန်တွေကိုရိုက်ကူးတဲ့အတွက်လူအများစုကပိုကောင်းတာကိုတင်ပြကြတယ်။ အမူအကျင့်များကိုဖမ်းယူရန်အခွင့်အရေးသည်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်ဖြစ်ကာ DP ၏ဘောင်အတွင်းသို့ကျဆင်းသွားသည်။ ပူးတွဲပါ ၀ င်မှုသည်အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်ဖြစ်ပျက်နေသောဇာတ်လမ်းဆွေးနွေးမှုများတွင်မကြာခဏဖြစ်သည် အရာဝတ္ထုများသည်သဘာဝ၌အချိန်နှင့်အမျှပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေသည်။ မကြာခဏသင်ရိုက်ကူးမည့်သင်ရိုက်ကူးသည့်ဇာတ်လမ်းသို့မဟုတ်သင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကိုသင်တွေ့ရှိရသည်။ ထိုအချိန်တွင်ပူးပေါင်းပါ ၀ င်မှုသည်အမှန်တကယ်ပုံသဏ္takesာန်ရှိပြီးကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်နှစ်သက်သောလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အတွေးအခေါ်များကိုတွန်းထုတ်ပြီးဇာတ်လမ်းကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်တီထွင်ဖန်တီးမှုများစွာဖြစ်ပေါ်သောနေရာဖြစ်သည်။
Mark MacEwen သည်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များကိုဖမ်းယူရန် Cooke မှန်ဘီလူးကိုအသုံးပြုခဲ့ပုံ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်အနှစ် ၂၀ ကျော်ပါဝင်ခြင်း၊ မာ့ခ်မက်ဝင်းတွင်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းတွင်အတွေ့အကြုံအလုံအလောက်ရှိသည်၊ ချက်ပြုတ် miniS4 / i မှန်ဘီလူး သူ့ရဲ့ဆက်တိုက်အတွက် "Cooke Look" ကိုပိုမိုပေါ့ပါးသည့်ပုံစံဖြင့်ယူဆောင်လာသည်။
ဒီသတ်သတ်မှတ်မှတ်areaရိယာအကြောင်းပြောနေတာအခါ, Mark ကဆိုသည် “ ကျွန်တော်က Cooke မှန်ဘီလူးတွေကိုအရင်သုံးပြီးသူတို့ကိုအမြဲတမ်းချစ်ခဲ့တယ်။ Cooke မှန်ဘီလူးတွေရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကငါ့အတွက်လုံးလုံးလုပ်ပေးတယ်။ ပြီးတော့သူတို့ဘာသာရပ်၊ နောက်ခံနဲ့မီးတောက်တွေကိုခွဲခြားပုံကငါကမ္ဘာကိုမြင်ရတဲ့ပုံပဲ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်အာရုံခံကိရိယာတွေမှာသူတို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့သူတို့ဟာကင်မရာကနေဒီဂျစ်တယ်အစွန်းကိုဖယ်ထုတ်ပြီးပိုပြီးအော်ဂဲနစ်၊ “ MiniS4 / i ရဲ့အရွယ်အစားနဲ့အလေးချိန်ကကျွန်တော့်ကို tripod အလုပ်အတွက်သာမကတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့အတူလက်ဘက် gimbal အလုပ်တွေအတွက်ပါအသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့လို့ကြီးမားတဲ့အရွယ်အစားနဲ့အလေးချိန်ကြောင့် M waitingVI Pro တူးစင်ကိုနာရီပေါင်းများစွာကြာအောင်စောင့်ခဲ့ရပါတယ်။ အပြုအမူ၏ညာဘက်အခိုက်သို့မဟုတ်နည်းနည်းသည်။ တည်ဆောက်ပုံအရည်အသွေးသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီးအောက်ဖော်ပြပါအာရုံခံကိရိယာများနှင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ "
ဘယ်လိုမာကုကိုလည်းဖော်ပြခဲ့သည် “ ကျွန်တော့်အတွက် 40mm နဲ့ 50mm ဟာငါအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့မှန်ဘီလူးတွေပါ။ ပြီးတော့သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုနောက်ခံမှခွဲထုတ်ရန်နှင့်ရှည်လျားသောမှန်ဘီလူးများနှင့်အကျဉ်းစခန်းများအကြားပိုမိုလွယ်ကူစွာဖြတ်သန်းနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်သည် focal length အလုံအလောက်ပေးသည်။ ထို့အပြင်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ရိုက်ကူးရေးအတွက်ပိုမိုရှည်လျားသော focal lengths သည်ပိုမိုအသုံးဝင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပြoftenနာသည်ဘာသာရပ်များနှင့်နီးကပ်နေပြီဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ချက်ပြုတ် miniS4 / i မှန်ဘီလူး ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် ၁၈ မီလီမီတာ၊ ၂၅mm၊ ၄၀mm၊ ၅၀mm နှင့် ၁၃၅ မီလီမီတာ focal length များပါဝင်သည်။
ကွန်ဂိုတောတောင်များရှိအနိမ့်ဂေါ်ရီလာများကိုရိုက်ကူးသည့်အခါအန္တာတိကရှိဆင်တံဆိပ်များကိုရိုက်ကူးသည့်အခါအလင်းအခြေအနေသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားခဲ့သည်။ ဤအကန့်အသတ်ရှိသော်လည်းမာ့ခ်သည်အလွန်စိတ်စွဲမှတ်သွားခဲ့သည် ချက်ပြုတ် miniS4 / i မှန်ဘီလူး လည်ပတ်နေသူသူဘယ်လိုအပေါ်အသေးစိတ်ရှင်းပြသည် နောက်ခံအလင်းကိုပြင်းထန်စွာအသုံးပြုခြင်းသည်မကြာခဏဖြစ်သည်။ တော၌ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်အလင်းနည်းမှုများစွာရှိပြီးအလွန်တောက်ပသောနေရောင်ခြည်များနှင့်အလွန်ပြင်းထန်သောအရိပ်များရှိသည်။ ခေတ်သစ်ကင်မရာစနစ်များပင်၎င်းနှင့်အတူရုန်းကန်နေရခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်မှန်ဘီလူးသည်အလင်းကိုဆန့်ကျင်။ အထောက်အကူပြုနိုင်ပါကသို့မဟုတ်အနုပညာအထောက်အကူပြုနိုင်ပါကခြားနားသွားစေသည်။ ”
မာ့ခ်၏ချီးမွမ်းခြင်းသည်အဓိကအားဖြင့်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည် ချက်ပြုတ် miniS4 / i မျက်ကပ်မှန်များ ဘက်စုံသုံးအဖြစ်ကောင်းစွာဟီလီယမ်။ ဒါကစီးရီးအတွက်ကင်မရာရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်၊ “ frame rate, resolution နဲ့ size ကဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့တွေကိုမှန်ဘီလူးရှည်ကင်မရာတစ်ခုအနေနဲ့သုံးနိုင်တယ်၊ သေးငယ်တဲ့လက်ကိုင် gimbals တွေပေါ်ဒါမှမဟုတ် GSS / Shotover / GSS လိုကြီးမားတဲ့ရဟတ်ယာဉ်စနစ်တွေထဲထည့်နိုင်တယ်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့မှာ Pre-roll ကိုသုံးနိုင်စွမ်းရှိတယ်၊ ဒါကတစ်ချိန်ကတစ်ခါဖြစ်ပျက်ခဲ့ဖူးတဲ့အရာတွေကိုရိုက်ကူးဖို့အတွက်အားသာချက်ပါပဲ။ ”
Mark ရဲ့အထူးမြင်ကွင်း ကမ္ဘာခုနစ်ပါး, ဂြိုလ်တစ်ခု
စီးရီး၏ဗေဒအကြောင်းနှင့်သူ၏အကြောင်းကိုထပ်မံဆွေးနွေးရာတွင်မာ့ခ်သည်ဇာတ်လမ်းတွဲမှသတ်သတ်မှတ်မှတ်မြင်ကွင်းတစ်ခုကသူ့ကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ “ ငါအန္တာတိကဇာတ်လမ်းတွဲအတွက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဆင်တံဆိပ်တွေကိုရိုက်ကူးခဲ့တယ်။ ငါရိုက်ကူးတာကိုတခြားသူတွေနဲ့ကွဲပြားအောင်ကြည့်ချင်အောင်ကြိုးစားချင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ရိုက်ကူးဖို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကတော့ ၁၈ ပေအထိကြီးမားတဲ့ဗေဒင်တွေ။ ရှည်လျားသောနှင့် 18lbs ။ ထောင်နှင့်ချီသောသူတို့သည်မိတ်လိုက်သည့်ရာသီတွင်ပေါ်လာပြီးအမျိုးသားများကသူတို့၏မျိုးပွားပိုင်ခွင့်အတွက်တိုက်ခိုက်ရန်ပြင်ဆင်ကြသည်” နောက်ထပ်ဘယ်လိုဘယ်လိုဖော်ပြစဉ် MacEwen ပြန်ပြောပြ “ ကျွန်တော်ဟာ miniS4 / i's တွေကို gimbal မှာသုံးပြီးသူတို့ကြားထဲ ၀ င်ရောက်ဖို့၊ တိုက်ခိုက်မှုရဲ့ခံစားချက်ကိုဖမ်းယူနိုင်ဖို့နဲ့အမြင်အာရုံကိုတီထွင်နိုင်ဖို့အတွက်အသုံးပြုခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီသတ္တ ၀ ါတွေကိုလှည့်ပတ်ဖို့မလွယ်ကူလှပါဘူး။ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကအခြားတစ်ယောက်ကိုစွပ်စွဲနေချိန်မှာငါဟာလမ်းကနေခုန်ထွက်ပြီးအခြားသူတွေကမင်းကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ခဏခဏခိုးနေရတယ်။ ဒါဟာကျွန်တော့်အတွက်အံ့သြစရာအကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုပါ။ ”
သဘာဝကျကျ, ထိုကဲ့သို့သောတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဖမ်းဆီးရမိအတွက်ထိုကဲ့သို့သောကျယ်ပြန့်အလုပ်၎င်း၏စိန်ခေါ်မှုများဝေစုရှိလိမ့်မယ်။ သို့သော်မာ့ခ်ကသူပြောသည့်အခါစိန်ခေါ်မှုအားလုံးသည်ကြီးမားသောတိရစ္ဆာန်များ၏ရလဒ်မဟုတ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည် “ ခြင်္သေ့တွေ၊ ဆင်တွေ၊ ဂေါ်ရီလာနဲ့ဆင်တွေအားလုံးကိုခြေရာခံတွေနဲ့ငါအနည်းငယ်နာမည်ပေးဖို့အားပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်သတ္တဝါတစ်ကောင်ကငါ့အတွက်သူတို့အပေါ်မှာထိပ်ဆုံးကချွေးပျားပဲ။ ၎င်းသည်သေးငယ်သော်လည်းများပြားသောချွေးများနှင့်တွေ့နိုင်သည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအများစုအတွက်သူကကျွန်တော့်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ အခက်ခဲဆုံးသူကိုတောင်မှအရာရာကိုဖယ်ရှားပြီးခဏအနားယူဖို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားစေတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အချိန်နှင့်၎င်းတို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့လက်အောက်ခံပတ်ဝန်းကျင်များကြောင့်ကိရိယာအစုံတွင်ထားရှိသောအလွန်အမင်းတောင်းဆိုမှုများ ငါ miniS4 / i ဟာအခြေအနေတိုင်းမှာအပြစ်အနာအဆာကင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ပြောရတာဝမ်းသာပါတယ်။ ”
ချက်ပြုတ် miniS4 / i သည်အသေးစိတ် lenses
အဆိုပါ ချက်ပြုတ် miniS4 / i မှန်ဘီလူး ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အလွန်မှန်ဘီလူးအချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းကိုအထောက်အကူပြုသော / i နည်းပညာဖြင့်ထောက်ပံ့ထားသည်။ ထိုမှန်ဘီလူးများကို PL တပ်ဆင်ထားသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရုပ်ရှင်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ကင်မရာများအားလုံးအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါ / i နည်းပညာ၏ဒီဇိုင်းတွင်ထည့်သွင်း ချက်ပြုတ် miniS4 / i မှန်ဘီလူး ကင်မရာရိုက်ကူးသူများနှင့် Mark MacEwen ကဲ့သို့သောကင်မရာအော်ပရေတာများကိုမှန်ဘီလူးချိန်ညှိခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်သည့်အကွာအဝေး၊ aperture နှင့်အတိမ်အနက်၊ hyperfocal အကွာအဝေး၊ နံပါတ်စဉ်၊ ပိုင်ရှင်အချက်အလက်၊ သူတို့ကအစ inertial ခြေရာခံခြင်းဒေတာ, shading နှင့်ပုံပျက်ဒေတာကို enable ။
Cooke miniS4 / i မှန်ဘီလူးများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကစစ်ဆေးပါ www.cookeoptics.com/l/minis4.html.
Mark MacEwen နှင့် DOP အနေဖြင့်သူ၏အလုပ်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကစစ်ဆေးပါ www.markmacewen.co.uk/.
S&K Technologies, Inc. သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမျှော်စင်များပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုရယူသည်။ - ဇန်နဝါရီလ 15, 2020
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ဘီဘီစီ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ချက်ပြုတ် miniS4 / i မှန်ဘီလူး FOR-တစ်ဦးက FOR-A, မူကွဲစနစ်များ, ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ကိုယ့် / နည်းပညာ Mark MacEwen ဂြိုလ်တစ်ခု အနီရောင်ဟီလီယမ် ၇ ခု လှံ & Arrows မူကွဲစနစ်များ	2019-12-24
ယခင်: ကွန်ယက်ဓာတ်ခွဲခန်း / လုပ်ငန်းစဉ်အင်ဂျင်နီယာ
နောက်တစ်ခု: VFX Legion နှင့် Madam အတွင်းရေးမှူး၏နောက်ဆုံးရာသီ